musha UNITED UMAMBO BioGRAPHY STORI UK Vatambi uye maActor Wentworth Miller Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Tinokupa iwe yakazara chinyorwa cheMichael Scofield AKA Wentworth Miller Nyaya Yemwana Wevacheche, Biography, Mhuri, Musikana / Mukadzi / Gay Chokwadi, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Mararamiro uye Hupenyu hwevanhu.
At ChildhoodBiography, Takave nechokwadi kuti tinokupai kuzere kuongororwa izhinji yezviitiko zvakakosha pamberi paMichael Scofield AKA Makore ouduku aWentworth Miller kusvika paakava nemukurumbira neTV Series "Jeri Break".
Hupenyu nekusimuka kweWentworth Miller. ? : Dailymail, Weddingandfashoni, uye Kreolmagazine.
Hongu, iwe neni tese tinomuziva saiye kugona kweiye Mugadziri weDombo, zvese nekuda kwechinzvimbo chake chakakurumbira saMichael Scofield muTV Series- Prison Break.
Nekudaro, vashoma chete vevateveri vake ndivo vakafunga kuverenga Michael Scofield AKA Wentworth Miller's biography, iyo yatigadzira uye inoshamisa. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Wentworth Miller Childhood Nyaya:
Kutanga kubva, Michael Scofield chaiye mazita Wentworth Miller Wentworth Earl Miller III. Mutambi weBritish-America akaberekwa musi wechipiri waChikumi 2 kuna amai vake, Joy Marie Palm-Miller, uye baba, Wentworth Earl Miller II kuChipping Norton, Oxfordshire, England.
Nyeredzi yePrison Break yaive yekutanga pavana vatatu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake. Baba vaWentworth Miller vanoGweta uye mudzidzisi apo amai vake, Joy Marie Palm-Miller, vaivawo mudzidzisi panguva yekuzvarwa kwavo. Mudiki Miller aive ari wega asingachengeti mwana panguva yehudiki hwake mazuva.
Mufananidzo Wakajairika Wevacheche waMichael Scofield AKA Wentworth Miller?: Dailymail.
Miller akaberekwa panguva iyo baba vake vachiri kufunda paYunivhesiti yeOxford. Yakanga isiri nguva refu mushure mekuzvarwa kwake kuti mhuri yake yakafunga zvekubva muOxfordshire kunogara muPark Slope, Brooklyn, muUSA.
Nekuda kwekugara kwevabereki vaWentworth Miller, ndangariro dzake dzehudiki dzakavakirwa panheyo dzehupenyu dzakashandiswa kuBrooklyn.
Wentworth Miller Mhuri Yepashure:
Pakutanga kuchinyorwa chino, takataura kuti iye ndiBritish-American. Izvi, nekureva, zvinoreva kuti vabereki vaWentworth Miller vanogona kuve nekwavo kwakabva mhuri kubva kumatunhu ese (UK neUS).
Iye mubairo-anokunda mutambi anobva kumhuri yepakati mhuri yemhuri. Nezve iyo yemhuri mavambo emhemberero yakatambwa, zvingafarire iwe kuziva kuti Wentworth Miller ane midzi yakadzika. Mune mamwe mazwi, Miller akawana dzinza rakaoma kunzwisisa nekuda kwemhuri yake dzakasiyana.
Maererano ne EthniCelebs, Mhuri dzemhuri dzeWentworth Miller dzinosanganisira makumi maviri neshanu muzana weAfrica-Jamaican, 25% African-American, 25% Rusyn, 25% Lebanese / Syrian, uye 12.5% Curaçaoan. Yokupedzisira isanganiswa yeDutch, French, Sweden, Hispanic, uye kure kwePoland.
Kudzikira pasi uye kuita kuti ive yakadoma kunzwisisa mhuri kwayakabva, Miller anonzi akabata mbiri mbiri yeAmerica nekuBritain. Baba vake havana kuchena asi vakasviba pakupedzisa, uye izvi zvinopesana nemufananidzo, vazhinji vakafungidzira.
Maizviziva here?… Baba vaWentworth Miller vari hafu yeAfrica-Jamaican uye nehafu yeAfrican-American apo madzitateguru amai vake anosanganisira Russian, Dutch, Sweden, Syria, French, uye Rebhanoni midzi.
Mhuri yaWentworth Miller Yemashure inoratidza rudo rukuru. Ona kuti anga achifara sei nababa vake (Kurudyi) naSekuru (pakati). ?: Hailtoyou.
Wentworth Miller Childhood Nhau- Upenyu hwepakutanga neAction:
Kukura muBrooklyn, Miller mudiki akaita ushamwari nevamwe vana uye aigara achiwana nguva yekutamba, kusanganisira kutamba mutambo navo. Nenguva isipi, mukomana mudiki akabva atamba kuita senge iye achizviona achitora mukana mumitambo yakasiyana-siyana achiri mukara.
Pakutanga, kutora chikamu mumitambo yevana kwaisava nyore kune ramangwana Prison Break mutambi. Hupenyu hwepakutanga hwaWentworth Miller mu Screenplays dzevana vakamuona achiona zvakaoma kusarudza kana ramangwana rake raive pacharo pachiri.
Nechemumoyo, muitiro wakaramba uchienderera mberi wakaona wechidiki achimbundira zvaari kuda kuenda, iyo nguva yake yekugona kuoneka.
Wentworth Miller Dzidzo uye Basa Kuvaka-Up:
Achipindura kufarira kwaaiita achiri mudiki neDrama, vabereki vaWentworth Miller vakaita kuti anyorere kudzidza paMidwood High School iri muBrooklyn.
Ndichiri muchikoro, ramangwana Prison Break Actor rakapinda "SING!" Uyu ndiwo mutambo wepagore wevadzidzi vepachikoro-mimhanzi yemitambo yemitambo yemitambo yemitambo yakagadzirwa naBella Tillis, mudzidzisi wemimhanzi paMidwood, muna 1947.
Aive mukurumbira alumni wepa mbiri Midwood High Chikoro kunyangwe hazvo akaendesa asati apedza kudzidza. ?: Midwoodhighschool uye Fanpop.
Nekuda kwerudo rwake rwemimhanzi uye Mutambo, Miller akapinda mumakwikwi akati wandei egore akarongwa neSING! kuyedza kugona kwake kwemitambo. Kunyangwe pasina zvinyorwa kana iye akatora chinzvimbo chekutanga.
Nekufamba kwenguva, mutambi uyu ane tarenda, nekuda kwezvikonzero zvemhuri, akabva kuMidwood High School kunodzidzira paQuaker Valley High School, Pennsylvania. KuQuaker Valley, Miller akabudirira kupedza High School yake mugore ra1990.
Wentworth Miller Biography- Yekutanga Basa Rehupenyu:
Mushure mekupedza chikoro chake kubva kuKwekwe High, Miller aifanira kusarudza nezvenzira yepamusoro yekudzidza, imwe yaizomubatsira kutanga munyika yekutamba.
Mushure mekufungisisa nzira dzinoverengeka uye pakupedzisira kutsvaga kubvumirwa nevabereki vake, mutambi wenguva yemberi akasarudza kudzidza Chirungu. Akanyoresa kuPrinceton University kwaakapedza kudzidza mugore ra1995.
Kudzidza English Literature kuPrinceton hakuna kukwana kuburitsa Miller kuti awone hunyanzvi hwekuita kwehunyanzvi hwaaishuvira. Paaive kuUni, akatanga kutamba na Acappella boka aizivikanwa Princeton Tigertones, iyo yakamupa kuwonekwa kwakawanda.
Nyatso tarisa mutambi wedu akapembererwa. Ona chimiro chake chinoyevedza kuPrinceton Tigertones. ?: Pakupedzisira.
Mushure mekupedza kudzidza kubva kuPrinston, mutambi akakurumidza kupinda muindasitiri yevaraidzo yeUS. Zvekare, mushure memwedzi mishoma yapfuura, mhuri yaWentworth Miller yakatamira, panguva ino kuenda kuLos Angeles muna 1995. Hupenyu hwepakutanga hwebasa hwaive hwenhema kuna Miller ku LA. Kare ikako, iye aive nebasa sebasa rakaderera mukambani inogadzira.
Wentworth Miller Biography- Nzira yekuenda Mukurumbira Nyaya:
Mukutsvaga kuwana mukurumbira uye kubudirira, Miller aifanira kukunda zvipingamupinyi zvakasiyana pamwe nematambudziko akawandisa. Akambotaura nezvekutambudzika kwake achiti;
"RUDO RWANGU RUDZIMAI KUENDA IYI YAKAKURU NGUVA YAKUSVIRA. PAKUTI MUDZIMAI WEMAHARAI UYE MUMAHARA WEZVINOTAURA UYE ROADBLOCKS. HANDIFANI KUFAMBA IZVO ZVINYI PANDINODA budiriro sezvinoita munhu anoda AIR. "
Chitsauko chekutanga mumugwagwa wake wekurumbira biography chakatanga paakatanga kuongorora maitirwo akasiyana siyana, rwiyo rwakamuita kuti ataridzike TV kwekutanga mu1998 anotyisa TV mfululizo "Buffy the Vampire Slayer. ” Iye zvino tarisa Wentworth Miller yekutanga firimu.
Miller's stagecraft yaive yakanaka kwazvo, iyo feat iyo yakamupa mubayiro sekukandwa kweanodzokorora kuita kwakadzokororwa chikamu mune mhenyu Fox yakateedzera - Nguva yeHupenyu hwako (1999-2000). Kutonga kubva kuWentworth Miller yake Nguva yehupenyu firimu, iwe unobvumirana neni kuti yaive nyaya yenguva chete asati azadzisa mukurumbira wepasi rose. Read on!
Wentworth Miller Biography- Simuka kune Mukurumbira Nyaya:
Consistency uye yakarongedzwa mitambo yemitambo yakanwisa Miller basa rake rekutanga nyeredzi mubato reABC mini “Dinotopia” mugore re2002.
Sezvo nyeredzi yepamberi yepasi rose yairamba ichikwira manera emukurumbira, akave akakwirirwa mamwe madiki madiki emumafirimu akasiyana kusvikira akunda jackpot hombe, mugore ra2005.
Miller akakandwa kuti atambe chinzvimbo cha Michael Scofield mumutambo wetsiva weFox Network "Jeri Break" mugore re2005.
Akava nyeredzi yepamusoro mushure mekuita nyeredzi saMichael Scofield muPrison Break
Kare ikako, vazhinji vemafirimu mafirimu vaisamboziva izvo izvo mainjiniya vanoita. Miller akaita kuti vateveri vazhinji vanzwisise basa reinjiniya yekugadzira sezvo iye akaronga hurongwa hwakanaka hwekupunyuka jeri rakaomesesa.
Pasina kupokana, iyo Prison Break TV Series yakazivisa kusarudzika kwaMiller kune nyika. Kuita kwake mumuratidziro kwakamuwanisa musarudziro weGweta Rakanakisa mu2005 Golden Globe Award.
Kuedza kwake kwakabereka michero sezvo akapihwa akanakisa mutambi wechirume weTV muna2008.?: Pinterest.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekumisa Wentworth Miller's Biography, mutambi anozivikanwa akatumidzwa seane varume vanehungwaru vakamboona paTV - uye kunyangwe ane tarenda kupfuura Mari Heist Muzvinafundo- Alvaro Morte. Akaitawo chitarisiko chakanakisa mune mamwe mafirimu akati wandei nemitambo yemavhidhiyo. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Wentworth Miller Vanoda Upenyu- Musikana, Mukadzi, Vana, Ngochani?
Kuziva kwevazhinji mafani nezvehukama hwehupenyu hweMiller kwave kutyisa. Mune mamwe kudyisa kubvunza kwako nezvehupenyu hwerudo hwaMiller, tinokuunzira mhinduro dzemimwe mibvunzo inowanzo bvunzwa nezveyemuvhi.
Ndiani musikana waWentworth Miller?
Kutanga uye pamberi pezvese, maitiro ake ezvepabonde akasimudza iwo mubvunzo wegoridhe wekuti ane musikana here kana kuti kwete. Ehe, Miller aive nemusikana pamusikana wake wekutanga kudanana. Akamboita mariana Mariana Klaveno (2006 - 2007) uye akambomenyerwa kuti aungana neAmie Bice (2007 - 2008).
Akanga achitaurwa kuti akambodanana naMariana Klaveno (L) naAmie Bice (R). ?: Hollywoodreporters uye Famousfix.
Wentworth Miller Ngochani?
Nezve hutano hwake, Miller akambofungidzirwa kuti ngochani. Iye, zvakadaro, akaramba zvakataurwa nevatori venhau pamwe nekufungirwa nevateveri vake nezvebonde rake muna 2007. Munguva yeHuman Rights Campaign muna Nyamavhuvhu 2013, Miller akabvuma pachena kuti aive ngochani. Zvisinei, asati abvumirwa kupinda pachena, akange afambidzana naLuke Macfarlane (2007 - 2008) naKristoffer Cusick, anoratidzwa pazasi.
Akave nehukama hunonakidza uye hwepedyo naLuke Macfarlane (L) naKristoffer Cusick (R). ?: Filmjournal uye Marriedbiography.
Wentworth Miller ane chero vana here?
Hushamwari hwaMiller hwekudyidzana nemusikana wake uye vakomana vake kusvika parizvino hauna kukonzera kuberekwa kwe chero vana. Uyezve, haana kuratidza kufarira kwake kubereka chero mwana panguva ino. Zvisineyi, inguva chete inobata chakavanzika chekuti kana iye mukurumbira mune rimwe zuva achazogadzira pfungwa yake kurera mwana wake.
Wentworth Miller Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Muchikamu chino, tinokuunzira humwe husingarambidzike hupenyu hwemhuri chokwadi chedu chakakurumbira - Miller. Pazasi pane zvizere ruzivo nezve nhengo yega yega yeWentworth Miller vabereki uye nevamwe vese vemhuri yake.
Nezve Amai vaWentworth Miller:
Joy Marie Palm-Miller ndiamai vaMiller. Iye mudzidzisi wezvedzidzo yakakosha uye akazvipira zvikuru kuti ave nechokwadi chekuti mwanakomana wake anowana rutsigiro rwaamai rwese rwavanofanirwa muhupenyu. Zano ramai vake kune vedu vane mukurumbira Jeri Break nyeredzi yave iri kurudziro huru mukuda kwake ukuru.
Pamusoro paBaba vaWentworth Miller:
Wentworth Earl Miller II ndiye baba vaMiller. Iye igweta pamwe chete nemudzidzisi uye akashanda zvisina basa kuti ave nechokwadi chekuti anotsigira vana vake mukubudirira muhupenyu. Aidzidza paYunivhesiti yeOxford paRhodes Scholarship panguva yekuzvarwa kwaMiller. Baba vaMIller vatema uye vane dzinza reAfrica-America.
About Vanababa vaWentworth Miller:
Maizviziva here?… Nyeredzi Yejeri Break ine hanzvadzi mbiri, dzinoti; Leigh Miller naGillian Miller. Kunyangwe iye asina hama, akavaka hukama hwakasimba nehama neshamwari dzepedyo. Sezvo Miller haawanzo kutaura nezve hanzvadzi dzake, hapana ruzivo rwunozivikanwa nezve babamunini vake uye muzukuru wake.
About Wentworth Miller's hama:
Kunyangwe hazvo Miller achitaura zvishoma nezve mhuri yake yakatarwa, dzimwe nguva anoshandisa nguva yakanaka navo. Akaonekwa achifarira kudya nababamunini vake, Mila Jasey, hama dzake; Rhena Jasey naJason Cox, pamwe chete nehanzvadzi yake; Leigh Miller. Nehurombo, babamunini vake, Chris, aive mumwe wehama dzake dzakakurumbira dzakashaika mune yavo yekubatanidzwazve. Tarisa uone pamufananidzo wavo pazasi.
Ikoko ari kunakidzwa nenguva nemhuri yake. Kubva kuRR; Mila Jasey, Rhena Jasey, Leigh Miller, Wentworth Miller, naJason Cox. ?: Hailtoyou.
About Vanasekuru vaWentworth Miller:
Babamukuru baba vaWentworth Miller vaive Wentworth Earl Miller, apo sekuru vake baba vaPauline Pinkston. Zvakare, vanasekuru vake vavaamai vaFrederick William Palm naMildred Emiliya Hawaka.
Wentworth Miller Hupenyu hweMunhu:
Kunze kwebasa rake rekuita, Miller akachengetwa uye anoona zvinoitika zvakapoteredza nharaunda yake. Persona yake isanganiswa yeGemini Zodiac chiratidzo. Dzimwe nguva anoenda kunoshambira kuti anozvizorodze iye.
Iye muvhimi wemuvhi nyeredzi haasi kufarira kuburitsa zvinhu zvinomufadza. Akatadzawo kutaura nezvezvaaifadza chaizvo panguva yekubvunzurudzwa. Nekudaro, anozviti "anorwara nemweya" kumakati - uye hazvisi izvo (kunyangwe vanhu). Anotsanangura kuti:
“ZVISINA KUTI, NDEVANOTI ZVESE ZVIRWERE NEVANHU VANHU.
Paive neCHEMA PANDI KUTI NDIPI KUTI NDOPA DOMINIC PURCELL aka Lincoln Burrows A HUG - UNOZIVA.
KUTENDA EMBORA KUTI VANZVADZE - uye PAKUSVIRA PENYAYA NDAKANYA RASHI PANGUVA YANGU. "NDAKANYENGA ZVAKAWANDA KUSVEDZA IZVI."
Wentworth Miller Hupenyu:
Wentworth Miller akaunganidza hupfumi hwakawanda seanobudirira Hollywood mutambi uye screenwriter. Ane mari inofungidzirwa yemamiriyoni mana emadhora. Kwaakabva hupfumi hwake kunonyanya kubva pabasa rake rekuita. Maitiro ake ekushandisa mari anoratidza kuti anonakidzwa neupenyu hwakanaka.
Iyo Prison Break superstar yakachengeta ruzivo nezve imba yake yakasarudzika zvakavanzika. Iye ane muunganidzwa wemotokari dzoumbozha. Anonyanya kutaridzika pakati pemotokari dzake BMW M3 yake, iyo yakakodzera kumhanya madhora mazana matanhatu nemakumi matanhatu. Tarisa uone BMW yake M66,500 inoratidzwa pazasi.
Miller anomira padivi peye BMW M3 yake yepamusoro. ?: Zimbio.
Wentworth Miller Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Wentworth Miller yehucheche nyaya uye biography, heano zvimwe zvishoma-kuzivikanwa chokwadi pamusoro pake izvo zvichakubatsira iwe kuti unzwisise zvakakwana mufananidzo weBio yake.
Chokwadi # 1: Kudya Makirabhu:
Mutambi wetsiva uyu aive nhengo yemakirabhu maviri akasiyana ekudya kwake panguva yekupedza kudzidza kwake kuPrinceton University. Zvikonzero zvake zvekujoinha makirabhu ezvekudya anozivikanwa zvakanyanya kwaari. Nekudaro, kuve nhengo kwake chiratidzo chekuti anoda chikafu.
Chokwadi # 2: Wentworth Miller, muimbi here?
Miller haisi yakawanda yemuimbi kupfuura zvaari kuita. Kunyange zvakadaro, akaonekwa mune maviri Mariah Carey's mimhanzi mavhidhiyo; Zvakafanana neizvozvo uye Isu Tinobatana. Yeuka, isu takambotaura kuti Miller aimbove weboka reAcapella paakanga ari muYunivhesiti. Chokwadi ichi chinoratidza kuti anogona kunge ari muimbi akanaka.
Ona chipfeko chake chinoshamisa muVhidhiyo yaMariah Carey - Isu Tiri pamwechete. ?: Antonithonx.
Chokwadi # 3: Wentworth Miller's tattoo:
Munguva yekutsikiswa kwePrison Break, Miller aifanirwa kunyora ma tattoo akati wandei paganda rake mune zvimwe kuita basa rake zvinobudirira mufirimu. Asi kana zvasvika kune chisarudzo chehupenyu chaihwo, mutambi wechikamu haana tattoo-akasununguka uye haafariri hunyanzvi hweinking.
Muviri wake waive nehurongwa hwake hwekupukunyuka nenzira yetatoo paakatarisa saMichael Scofield mujeri rekutsemuka. ?: Pakati.
Chokwadi # 4: Chitendero chaWentworth Miller:
Mutambi wePrison Break ane tateguru wechiJuda asi haana, mune chero mamiriro ezvinhu, akazvizivisa kuti aive muJuda. Chokwadi ndechekuti, zvinoita sekuti vabereki vaWentworth Miller vakamudzidzisa kugamuchira nzira isiri yechitendero. Muchidimbu, Miller uyo asiri wezvechitendero uye anongotaura nezvekutenda kwake muchimiro chebasa rake.
Chokwadi # 5: Kushushikana kwaWentworth Miller:
Miller akaenda kuFacebook peji rake muna 2016 kuburitsa pachena kuti akange ainetseka nekuora mwoyo kubva achiri mudiki. Akataura kuti kurwira kwakamupedza zviuru zveusiku kusarara, mari, zviwanikwa uye hukama.
Iye mutambi weBritish-America akambofungisisa kuzviuraya pane imwe nguva muhupenyu hwake uye akazopedzisira atanga kutsvaga nyaradzo mukudya kuti apore pfungwa.
Miller's wiki zivobase inobatsira iwe kuwana ruzivo nezvake zvine musoro uye zvinobudirira. Tsvaga pazasi;
Zita rizere: Wentworth Earl Miller III
NickName: Wentworth Miller
Akazvarwa: 2nd June 1972
Baba: Wentworth Earl Miller II
Amai: Joy Marie Palm-Miller
Vanun'una: Leigh naGillian Miller (hanzvadzi dzechidiki)
basa Nyanzvi uye Screenwriter
urefu 1.85 m (6 tsoka uye 1 inch)
uremu 77 makirogiramu (170 Ibs)
Ethnicity Marudzi mazhinji
Kutenda nekuverenga Biography yaMichael Scofield, iyo Prison Break Fictional hunhu. Zvikawanda saka, ndinokutendai nekutenda mune Zvatiri uye Zvatinoita.
Ndichiri kuisa chinyorwa ichi paWentworth Biography uye yeChinyorwa Chemwana, vatariri vedu vaive pakarinda kuona uye kurongeka. Nomutsa isa zvaunofunga kana kuti tibate kana ukaona chimwe chinhu chisinga tarise pane ino chinyorwa nezve Wentworth.
Zvikasadaro, isa chirevo nekutitaurira uyo waunofunga kuti akapwanya zvakanyanya- Prison Break's Scoffield kana Mari Heist purofesa?.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 17, 2020
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Emilia Clarke Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts